Fivoriambe fahadimy UE – UA : Ny famoronan’asa ho an’ny tanora no vahaolana -
AccueilRaharaham-pirenenaFivoriambe fahadimy UE – UA : Ny famoronan’asa ho an’ny tanora no vahaolana
01/12/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
« Ny fametrahana politika mazava momba ny fambolena, ny fizahantany, ny teknolojia vaovao, ary ny fampianarana sy fanofanana arak’asa ihany koa no isan’ny vahaolana ho an’ny tanora, Madagasikara rahateo manana tany malalaka azo ambolena » hoy ny filoham-pirenena malagasy Hery Rajaonarimampianina nandritra ny famaranana ny fihaonana an-tampony fahadimin’ny vondrona afrikanina sy ny eoropeanina tatsy Abidjan-Cote d’Ivoire . «Manana anjara toerana amin’ny hampandrosoana an’izao tontolo izao, noho ny fananany ireo tanora ampahefany manerantany i Afrika, ary efa miova ihany koa ny fomba fijeriny » hoy ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina. Nanamafy hatrany noho izany ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina fa ny ny sehatry ny fambolena no hanarenana ny firenena sy hamoronana asa ho an’ny tanora, satria ny 80% ny Malagasy rahateo dia tantsaha avokoa. Manoloana ireo rehetra ireo dia nisy fihainoana ny hevitr’ireo tanora afrikana sy eoropeanina miisa 36, mikasika ny olana mianjady amin’izy ireo nanolona ireo filoham-panjakana 83 nanatrika . Isany vahaolana naroson’ny filohan’ny repoblika Malagasy Hery Rajaonarimampianina ny fametrahana fotodrafitrasa ho an’ireo tanora ao amin’ny toerana izay niaviany fa tsy any amin’ny toerana izay izay hitsoahan’ izy ireo .
Tombontsoa maro tokoa noho izany no azo amin’ny fanatrehana fihaonana an-tampony tahaka ity tany Cote d’Ivoire ity, satria dia anisan’ny nahazoana famatsiam-bola 234 tapitrisa Euros avy amin’ny vondrona eoropeanina sy banky eoropeanina ho an’ny fampandrosoana izany. « Tokony hafainganina ny famoahana ny famatsiam-bola avy amin’ireo mpmatsy vola tahaka ny an’ny vondrona eoropeanina , ary mila hamaivanina ny kipitsopitsony madinika amin’ny ahazoana izany » hoy ny filoham-pirenena raha namaly mahakasika ny fanambaran’ny filoha frantsay Emmanuel Macron hoe « tsy misy intsony ny politika manokana apetrak’i Lafrantsa any Afrika ». Nandritra ny fivoriambe ihany, dia nisy ny fihaonana manokana teo amin’ny filoha ivoriana Allasane Ouattara, ny filoha Sénégalais Macky Sall, ny filoha Frantsay Emmanuel Macron, ny filoha Burkinabe Roch Marc Christian Kaboré, ny Praiminisitra maorisiana Pravind Jugnauth.
Tsy nisy rahateo ny fehin-kevitra, na fanambarana natao tamin’ izao fihaonana an-tampony faha-05 ny vondrona afrikana sy vondrona eoropeanina izao, satria tsy nisy marimaritra iraisana momba ny fahataperan’ny fifanarahana cotonou, na accord de cotonou izay hisian’ny fiaraha-miasa eo amin’ny vondrona eoropeanina sy ACP – Afrika, Caraibe, Pacifique izay ho tapitra amin’ny taona 2020.
Raharaha ny zava-mitranga eto amin’ny firenena, andro vitsy hiatombohan’ny fampielezan-kevitra. Nanome fe-potoana 24 ora ny HCC sy ny Ceni ary ny fitondram-panjakana, ireo kandidà miisa 22. Antony dia ny tokony hanokafana ny lisi-pifidianana sy hampahafantarana ...Tohiny